Qiijinta sigaarka iyo cilad-korodhyada sonkorowga | Smoking and diabetes complications
Ma u baahan tahay gargaar?
Dhakhtarkaaga kala hadal ikhtiyaaradaada daweyn ee ugu fiican. Waxa kale oo bixiyahaaga caymiska weydiin kartaa barnaamijyada joojinta ee laga yaabo inaad heli kartid.
Si aad u heshid macluumaad ku saabsan joojinta qiijinta, Diiwaangalinta Fasalka Allina Health (Allina Health Class Registration) ka wac 1-866-904-9962 ama booqo allinahealth.org/classes.
English: Smoking and diabetes complications
Qiijinta iyo sonkorowga
Qiijintu waxyeelo ayay u leedahay caafimaadka qof kasta, laakiin gaar ahaan waxay u sii leedahay dadka qaba sonkorow ama macaan.
Qiijinta oo lagu daro sonkorowga waxay in ka badan labanlaab kordhinaysaa halistaada cudur iyo dhimasho ka timaada cudur wadne, faalig iyo wareeg dhiig oo daciif ah. Dhibaatooyinka cagaha, kelyaha iyo indhaha waxa dhammaantood uga sii dari kara qiijinta.
Sida qiijintu kuu saameynayso
waxay jartaa qaddarka oksijiinta ah ee u tagaya xubnaha jidhka
waxay kordhisaa heerarka kolesteroolka
waxay waxyeelaysaa oo cidhiidhi ka dhigtaa xididada dhiigga
waxay kordhisaa cadaadiska dhiigga
waxay kordhisaa iska caabinta insulinta taasoo keeni karta korodh ku yimaada heerarka gulukoosta dhiigga
waxay sababi kartaa kacsi la'aan
Sonkorowga ayaa marka horeba halis kaaga dhigaya dhibaatooyinka kor lagu taxay. Halisyadaada sidii aad u yareyn lahayd kaliya ma aha inaad xakameysid sonkorowgaaga balse waxa kale oo ku caawin kara inaad joojisid qiijinta.
Talooyin ku saabsan joojinta qiijinta
Waxa jira saddex heer oo loo marayo joojinta:
Isu diyaarinta joojinta. Waa inaad rabtid inaad joojisid, sidaa daraadeed ka fikir sababo fiican oo ay tahay inaad joojisid ka dibna samee waxyaabahan soo socda.
Taageero ka raadso qoyska iyo saaxibada.
Dhakhtarkaaga kala hadal qiimaha isticmaalka xanjo calaashi ama dhejisyo leh nikotiin, dawooyin ama gargaar kale oo wax ka taraya joojinta.
Iska ilaali meelaha aad og tahay inaad rabi doontid inaad qiijisid.
Qorsheyso hawlo si aad ugu beddeshid qiijinta.
Dooro maalin aad joojisid.
Ka takhalus sigaarka, weelka daminta sigaarka iyo shideyaasha.
Qorsheyso abaalmariinno. Xusuuso, waxa kuu dhigmaya lacag badan sidaa daraadeed waad awoodi doontaada inaad naftaada abaalmarisid!
Dib u fiiri qorshahaaga hawlgalka.
Jooji maalinta aad qorsheysay inaad joojisid.
Ka taxadir khamriga iyo xaaladaha laga yaabo inay keenaan inaad markale bilawdid qiijinta.
Maalin walba gooni ula tacaal. Ha ka warwarin berrito.
Sii wadista joojinta.
Ku fikir waxyaabo fiican. Xusuuso sababta aad u go’aansatay inaad joojisid. Naftaada abaalmari.
Iska ilaali xaaladaha adag.
Ha ciyaarin ciyaaro ah sida, "Hal sigaar waxba dhibi maayo."
Raadi macluumaad ku saabsan kooxaha gargaar naftaada ama kooxo taageero oo ah degmada haddii aad u maleynaysid inay taasi wax ku tari doonto.
Waxay qaadan doontaa qiyaastii saddex bilood inaad iska soo qaadid inaad tahay qof ah ma-qiijiye. Intaa ka hor, waxa aad wali isku arki doontaa qof ah qiijiye waxana laga yaabaa inaad damacdid inaad tiigsatid hal xabbo oo sigaar ah marka aad walaacsan tahay.
Haddii aad dib ugu noqotid qiijinta, ha walwalin. Dad badan ayaa mara saddexda heer dhawr jeer ka hor inta aanay guulaysan. Marka aad diyaar tahay, dib u fiiri qorshahaaga inaad joojisid oo markale bilaw.
Source: Allina Health's Patient Education Department, Qiijinta sigaarka iyo Cilad-korodhyada Sonkorowga, dia-somali-ah-16915
Last Reviewed: 10/15/2009